Nhau - Fang Ming-Solution-proof swirl slide yakashandurwa kune inoshandura slag yekumira mashandiro
Zhengzhou Fangming Yakakwira-Tembiricha Ceramic Nyowani Zvishandiso Co, Ltd. yakagadzira uye ikashandisa zvinotevera zviviri zvitsva slag mira masiraidhi mahwendefa ekushandisa kweanoshandura slag yekumira mashandiro uye akawana mvumo patent:
1. Anti-metallic solution inotenderera-siraidhi ndiro: iyo inoshandura slag yekumira mashandiro anti-swirl slide ndiro uye nzira inoshandiswa pakuyambuka nekuvharwa kwesimbi yekunyungudutsa uye mamwe madhivhisheni epamusoro-tembiricha. Inosanganisira zvidhinha zvemapombi zvesimbi, zvidhinha zvemukati zvemukati, zvidhinha zvemukati zvemasiraidhi, uye zvekunze Iwo masiraidhi ezvidhinha uye ekunze zvidhinha zvemombe zvinoumbwa nezvidhinha zvishanu. Panguva imwecheteyo, zvidhinha uye zvidhinha zvakabatana ne concave uye convex, iyo yepasi ndiro, iyo inoratidzira dura kana iyo inoratidzira inlay layer uye yekunamatira dura, iyo yemukati madziro yemhinduro gwara reiyo yemukati slide zvidhinha uye yekunze slide zvidhinha zvakagadzirirwa kuve zvakasiyana Iyo yenguva dzose-yakaumbwa chiteshi iri concave uye convex. Iyo yekubatanidza ndege pakati peyemukati masiraidhi block uye yekunze slide block inomanikidzwa-yekumanikidza neyekunze mashandiro, uye hapana mukaha. Iko kusunda kwesimba rekunze simba kunokonzera kukakavadzana pakati peyemukati memasiraidhi uye yekunze slide block yekukwevera kuchiteshi.
Inoenderana nzvimbo, mhinduro inopfuura; dhizaini yechigadzirwa ichi inogona kudzivirira kuumbwa kwesarudzo yemhepo inokonzerwa nekumanikidza kana mhinduro yacho ikapfuura pakati pesiraidhi yemukati neyetiri yemasiraidhi, uye kumanikidza mhinduro yenguva dzose yekutenderera kuti ive mhinduro yekudzika. Iko kusarongeka zvisina kufanira kwesarudzo gwara uye kunamatira kwesimbi slag kwakakonzera kukuvara kwemukati nekunze kwemasiraidhi ndiro inokodzera pamusoro uye nekukuvara kwemukati mebhuru yezvidhinha neyekunze yemhino yezvidhinha neyakagadziriswa mhinduro. Iine maitiro akanaka; inochengetedza zvakanyanya zviwanikwa, uku ichichengetedza mari uye ichiwedzera Hupenyu hwehushumiri hwakareba uye kugona kwakasimba. Chechipiri, iyo isina kujairika concave-convex dhizaini yemhinduro chiteshi yeyakavakirwa yakasanganiswa yakakomberedzwa inogona kugadzirwa zvisina tsarukano, uye haina kuganhurirwa nechimiro chiri pasi pechirevo chekuona iko kuburitswa kwemhinduro, iyo inovandudza iyo yazvino inoenderera yakakura- chikero chekugadzira chinodikanwa mukunyungudika, kunatsa, uye maindasitiri esimbi.
2. Iyo yekumusoro inotsvedza siraidhi yeiyo anti-yakashongedzwa muviri pasi pekumanikidzwa: Inoenderana nemunda wesimbi metallurgia, kunyanya yakadzamidzirwa anti-induction yekumusoro kusimudzira zvedongo yemukati yepakati slide ndiro yakashandiswa pane inoshandura slag yekumira mashandiro, kusanganisira slide ndiro , uye yekunze mhete pamusoro pesiraidhi ndiro yakaiswa Iyo yekunamatira chidimbu, iyo slide ndiro inopihwa ine gomba remvura, uye zvedongo yemukati musika yekutenderera mhinduro yakarongedzwa mugomba. Iyo ceramic yemukati musimboti inosanganisira yemukati yakakosha muviri. Rusvingo rwekunze rwemuviri wepakati wepakati hauna kutsetseka, uye kumusoro kwemukati wepakati muviri wakaita denderedzwa uye unotambanudzira kunze Kune mukuru, wepakati wemukati wepakati muviri une cylindrical kuburikidza negomba rekutenderera mhinduro.
Irosi yemasiraidhi inosanganisira substrate, yekupisa yekuisa ndiro uye yepasi ndiro yakasungwa pamwechete kubva kumusoro kusvika pasi. Slide ndiro inoshandiswa kune yemukati ceramic yemukati yekupararira mhinduro. Musimboti wakagadzirwa seT-yakasangana chigadzirwa chigadzirwa, uye denderedzwa rekunze rinogona kugadzirwa sechimiro chisina kujairika, icho chinogona kudzivirira zvinobudirira zvikamu zvedongo zvakadzika mune yepamusoro slide ndiro kubva mukunyura uye kuchinjika nekuda kweiyo yepamusoro pevhu kumanikidza pakati yekumusoro neyakadzika masiraidhi ekutsetseka kwakanyanya. Iyo inochengetedza zvakanyanya zviwanikwa, inochengetedza mutengo, inowedzera hupenyu hwebasa reiyo yakazara skateboard, uye ine yakasimba kuchengetedzeka uye kugona.